Sọpụrụ 6 Plus, anyị nwalere ọhụrụ Honor phablet | Gam akporosis
Nsọpụrụ na-achịkwa iji nweta ọnọdụ na ahịa ahụ site n'ichepụta ọnụ yana ezigbo uru ego. Ekwentị niile nọ na Honor nsoro anyị nwere ike nwale ahapụla ezigbo uto n'ọnụ anyị. Ma ugbu a, ọ bụ oge iji mezue Sọpụrụ 6 Plus nyochaa.
Ngwaọrụ nwere ebumnuche doro anya: ịghọ nhọrọ iji tụlee n'ahịa maka phablets dị elu, nke Samsung na akara aka ya na akara igwe ya. Kedu ihe njirimara gị? Ogo nke rụchara, ike na ọnụahịa. N'ihi na ndị nrụpụta ole na ole na-enye ekwentị mkpanaaka nke njirimara ndị a na ụdị ọnwụnwa dị otú ahụ: euro 399.
1 Sọpụrụ 6 Plus, wuru na adịchaghị ihe
2 Ngosipụta: otu n'ime ike nke Honor 6 Plus
3 A phablet dị ike nke na-adabere na ngwọta ya
4 Android 4,4 KitKat, nnukwu ikiri ụkwụ Achilles nke Honor 6 Plus
5 Sọpụrụ 6 Plus igwefoto, ndị ọzọ akwa mma nke a na-akpali phablet
6 Ihe nlere nke foto ndi ewere Honor 6 Plus
6.1 Omenala foto na gburugburu ebe dị iche iche
6.2 Gbaa ya na Wide Aperture na-enweghị edezi na Wide Aperture na post-esichara
7 Nkịtị foto vs HDR mode
8 Batrị 3.600 mAh kwere nkwa karịa nnwere onwe zuru ezu
Sọpụrụ 6 Plus, wuru na adịchaghị ihe
Ekwentị niile dị na Honor, ụdị nke abụọ nke Huawei, na-eji plastik eme ihe maka ozu ha. Ihe ị ga-atụ anya na ngwaọrụ nwere ọnụahịa ndị dị otú ahụ. Ọ bụghị ikpe nke Sọpụrụ 6 Plus gwụchara.
Ma ọ bụ na nsọpụrụ elebara anya ọbụna ntakịrị nkọwa site na inye Honor 6 Plus. Ọ nwere atụmatụ mara mma? Ọbụghị ncha ncha. Na Ukpono 6 Plus bụ bland mgbe ọ na-abịa imewe , dika ndi ozo nke Honor. Ọ bụrụ n’ịhụ n’ihu foto ịmaghị ka esi amata ekwentị ọ bụ. N'ezie, n'ihe dị n'azụ ya, ihe agbanweela.
All ekele gị faiba glaasi rụchaa na azụ dna-asọpụrụ 6 Plus. Anya na-adị ka iko iko nke na-ejikọ Sony Xperia Zs, mana na aka ọ dị ka plastik dị mma. Ọ bụ n'eziokwu mmetụta na-achọ ịmata, mana ọ bụ nke dị mma. Na mgbakwunye, ụkpụrụ ahụ etinyere na njedebe dị ezigbo mma n'anya.
Rịba ama na, n'agbanyeghị ịbụ onye na-egbu egbu ma chọọ aka abụọ iji ya, adịgide ahụ dị mma nke ukwuu, -enweghị na mmetụta na phablets ndị ọzọ na-eme na-ejide ya na otu aka ọ ga-ada. N'iji nke 150,46 x 75,68 x 7,5mm na mgbakwunye nke 165 gram, o doro anya na nnukwu ọrụ nke ndị otu nhazi nke Honor iji mee ka 6 Plus bụrụ ngwaọrụ nwere aka n'agbanyeghị oke ya.
Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ ọnọdụ nke ọkà okwu na Honor 6 Plus. Otu ihe nlegharị anya nke phablet bụ ohere nke iji oke ya iji nwee ọfụma ọdịnaya na egwuregwu vidio. Igwe okwu, nke dị n’azụ ekwentị ahụ, na-egbochi anyị ikpuchi ya na mberede ka anyị na-egwu egwu. Ihe nke ukwuu ekele.
Dị ka icing na achicha ahụ, Honor 6 Plus nwere okpokolo agba ndị dị n'akụkụ, ma e wezụga maka ala, ebe ọdụ ụgbọ USB dị. Emechara a na-enye a ọbụna karịa adịchaghị na anya ọhụrụ phablet Asia. A na-ejikwa aluminom mee ụda olu na ike njikwa nke ọnụ ahụ, na-enwe obi ụtọ na aka ma na-enye mmetụta nke anwụ ngwa ngwa.
Naanị n'okpuru bọtịnụ ike anyị nwere oghere SIM abuo nke meghere site na ahụkarị agịga usoro. Nakwa na otu n'ime ya anyị nwere ike itinye Micro SIM ma ọ bụ kaadị micro SD, mgbe anyị nọ na mpaghara ọzọ anyị nwere ike itinye kaadi SIM Micro.
Na nkenke, na usoro imepụta Honor 6 Plus bụ ihe nzuzu ma ọ bụrụ na anyị ahụ ya site na ihu, mgbe ị gbanwere ya ihe gbanwererịrị. Emechara ya dị mma na-enye ekwentị a adịchaghị anya, ihe anyị na-ahụbeghị ruo ugbu a na phablet na ọnụahịa ahụ siri ike na-echebara njirimara ọrụ ya.
Ngosipụta: otu n'ime ike nke Honor 6 Plus
M kwuru na otu n'ime ndị isi ọrụ nke a phablet bụ inwe ike na-enwe multimedia ọdịnaya. Na akụkụ a, Honor 6 Plus kwadoro na ndetu. Ogwe IPS 5.5 nke anụ ọhịa ahụ nke Honor 6 Plus na-etinye na mkpebi 1080p na-enye oke nkọ, ekele ya karịrị 444ppp dị ịrịba ama na nkwa ahụ na ịgụ, ikiri vidiyo ma ọ bụ ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla ga-abụ ihe karịrị afọ ojuju.
Agba dị oke egwu mana eke, nwere oke ikwekọ zuru oke na akụkụ nlele na-arụ ọrụ nke ọma belụsọ na gburugburu ọkụ. Na, ọ bụ ezie na ụbọchị anwụ na-acha, ị nwere ike ịga n'ihu na-ahụ ihuenyo Honor 6 Plus, ihe doro anya na-ebelata nke ọma. Chefuo ile ihe nkiri na ụsọ osimiri belụsọ ma inwere nche anwụ na-ekpuchi ekwentị gị.
Ihe rNzaghachi ihuenyo mmetụ nke Honor 6 Plus zuru oke na nke kachasị na nchapụta kachasị karịa karịa. Dị ka ọ dị na omenala niile nke Huawei, onye nrụpụta na-enye gị ohere ịhazigharị agba agba nke ihuenyo Honor 6 Plus ka ị nwee ike ịhazigharị agba ndị masịrị gị.
A phablet dị ike nke na-adabere na ngwọta ya
Huawei pụtara maka ịmepụta ndị nhazi ya. Ya HiSilicon Kirin ngwọta bụ pụtara ihe ezi uche nhọrọ na-asọpụrụ 6 Plus integrates na mara mma girl nke emeputa si ibe: a processor. Kirin 925, SoC dị ike nke na-ejikọta cores Cortex A15 anọ na 1.8 Ghz na A7 anọ ọzọ na 1.3 Ghz.
Ọ bụrụ na anyị tinye na nke a nke ya Mali-T62 GPU, 3 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa dị n'ime, cheta na enwere ike ịgbasa ya site na oghere kaadi micro SD ya, nke a bụ njedebe zuru oke.
Ọ dị mma, ọtụtụ cores na karịa RAM zuru ezu, mana kedu ka Honor 6 Plus si arụ ọrụ? Dị ka silk. Ihe 42.113 rụpụtara site na Honor 6 Plus mgbe ọ gafere ule site AnTuTu gosipụtara ihe nnukwu ọrụ nke Huawei jiri Kirin 925 rụọ.
Ma enweghị m mmasị ịtụkwasị obi na ọnụ ọgụgụ na data, n'ihi ya, m nyere Honor 6 Plus okpete na-anwale egwuregwu kachasị egwu na ahịa, iji hụ otú Mali-T62 GPU si akpa àgwà na nke a. Ọzọkwa, ọ na-akwado iji agba agba; Ọbụnadị ntakịrị ntakịrị mgbe ịnwale egwuregwu dị ka ọgụ nke oge a 5.
Android 4,4 KitKat, nnukwu ikiri ụkwụ Achilles nke Honor 6 Plus
Ruo ugbu a, anyị na-ahụ ngwa ngwa zuru oke na arụmọrụ zuru oke. Mana Honor 6 Plus nwere ihe nzuzo gbara ọchịchịrị: akwa ya. Iji malite, Sọpụrụ mmehie n'ụzọ zuru ezu na ihere na-eme m: The Honor 6 Plus na-agba ọsọ na gam akporo 4.4 KitKat. Olee ọjọọ egwuregwu bụ ihe a? Ọ bụghị nkịtị maka ekwentị dị elu nke dakwasịrị ahịa na Mee nke afọ a ka ọ bịa na gam akporo 4.4. Ọ dị mma, site na Honor ha kwere anyị nkwa na mmelite nke Honor 6 Plus na gam akporo L na-aga ịda, mana anyị na-ekwu maka njedebe dị elu nke na-abịa n'ahịa nwere ụdị oge ochie nke sistemụ arụmọrụ.
Banyere akwa mkpuchi, Honor 6 Plus gbadara ala EMUI 3.0. Interface dị ụtọ nke, n'eziokwu ụdị iOS, na-eji desktọọpụ dị iche iche karịa drawer ngwa. Ozugbo i jiri ya mee ihe, ọ bụ ngwa ngwa na kensinammuo iji, yana inwe ike ịmepụta folda iji hazie ngwa gị.
Agbanyeghị na oyi akwa EMUI na-enye arụmọrụ kacha mma, n’enweghị nkwụsị ma ọ bụ nkwụsị, nhọrọ multitasking na-ewe ezigbo iwe. Site na ike nke Honor 6 Plus nwere, ihe kachasị mma bụ ịnweta ọtụtụ ngwa mepere ma jiri ohere nke ọtụtụ ọrụ nweta ha. Nsogbu bụ na ọ na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji nke abụọ iji mepee wee hụ ihe kachasị nke ngwa anọ mepere emepe na ịnwe isi na windo dị iche iche ịchọta ngwa ịchọrọ ịmepe nwere ike iwe. Ọ bụ ngwa ngwa ịga na nchịkọta nhọrọ ma chọta ngwa anyị chọrọ iji karịa iji uru nke ọtụtụ.
Na nloghachi anyị gosipụtara ọtụtụ nhọrọ nhazi, nke na-enye anyị ohere ịhazi ọtụtụ akụkụ na mmasị anyị, na-enwe ike ịgbanye ihuenyo site na mmetụ abụọ dị mfe, dị ka Knock nke LG, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịgbalite ụfọdụ ọrụ dịka Igwefoto site na ịme mmegharị dị mfe na ihuenyo. Mmetụta dị ezigbo mma ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa. N'ikpeazụ ana m ekele Jehova incorporation nke FM Radio dị ka ọkọlọtọ, ihe m n’onwe m na-aghọtaghị etu e si nwee ọtụtụ ndị nrụpụta na-ewepụta ihe ndị a.
Sọpụrụ 6 Plus igwefoto, ndị ọzọ akwa mma nke a na-akpali phablet
Otu n'ime ike nke Honor 6 Plus bụ igwefoto ya bụ isi, nke mebere Sony nwere megapixel abụọ 8-megapixel. Kedu? Anya m abụọ? Ee, nsonaazụ ya na-atọ ụtọ. Iji malite, anyị ga-enyocha ihe dị iche iche nhazi nke igwefoto Honor 6 Plus nyere.
Ihe ederede: mgbe ị na-eweghara ya na ọnọdụ a, ị ga-enwe ike itinye ihe ederede. Iouszọ dị egwu iji zipu ekele ma ọ bụ ekele.
Mma: Mgbe ị na-arụ ọrụ a, anyị ga-ejide ya, mana sistemụ ahụ ga-ahụ maka ihicha ntụpọ ndị ahụ na anụ ahụ, n'onwe m hụrụ na ọ baara m ezigbo uru, mana opekata mpe nhicha ahụ adịghị ọcha dịka nke ndị ọzọ
Abalị Super: Ọnọdụ a ịmata ihe ga - enyere gị aka inweta foto chabara achapụ site na ịgbagburu ọtụtụ gbaa nke igwefoto dị icheiche karịa ihe dịka sekọnd iri abụọ.
N'ime akụkụ ndị a niile, naanị ndị dị ịrịba ama bụ Ọnọdụ HDR na Ọnọdụ Supernight. Banyere ọnọdụ HDR, na Honor 6 Plus ọ na-arụ ọrụ dị ka silk. Na gburugburu nwere oke agba dị iche na obere ọkụ, ọnọdụ HDR na-arụ ọrụ ebube.
Ma Erndị Supernight, achọpụtara m na ọ bụ nhọrọ dị oke egwu mana enweghị nnukwu enyemaka. Iji malite, ị ga-edobe ekwentị ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sekọnd 20 ma ọ bụrụ na ịchọghị ka foto ahụ mebie. Ugbua agwala m gị na, mgbe ị gbalịsịrị ike, ọ gaghị ekwe omume ijide ọnọdụ na aka gị na ekwentị.
Gịnị bụ ihe ngwọta ya? A tripod, nke bụ ihe ekwentị ahụ na-atụ aro. Na-eburu n'uche nke ahụ Super Night mode na-ahapụ gị ịgbanwe ISO na ikpughe oge o doro anya na a na-eji ya eme ihe na profaịlụ ọkachamara. Ebe ọ bụ na anaghị m esokarị njem njem, ana m atụfu nhọrọ a dị ka ọ bara uru belụsọ na ọnọdụ ole na ole ebe anyị nwere ike ịkwado ekwentị na ụfọdụ ma ọ bụ na anyị chọrọ ịme ọtụtụ ohere nke igwefoto gị n'ụzọ ndị ọkachamara.
N'etiti ntọala anyị ga-egosi ịdị adị nke mkpebi mkpebi dị iche iche, ohere ịmepe oge 2,5 ma ọ bụ 10 nke abụọ, nhọrọ maka gbanwee ISO na nguzo ọcha ma ọ bụ ukpụhọde nke saturation, iche na ihie.
Ugbu a ị hụla teknụzụ nke igwefoto Honor 6 Plus, ka anyị gaa n'ihu rụọ ọrụ. Ma ọ bụ na igwefoto nke Honor 6 Plus juru m anya, na ọtụtụ. Maka mmalite anyị nwere ike idozi-dozie ihe elekwasịrị anya ma dozie ọkwa ngosi site na imetụ ihuenyo ahụ aka: n'akụkụ okirikiri a na-elekwasị anya na Sun na-egosi na anyị ga-agbanwe mgbanwe nke onyinyo ahụ n'oge. Iji mee nke a, anyị ga - eji mkpịsị aka gị tinye aka na gburugburu elekwasị anya. Ihe si na ya pụta bụ na, na foto abalị ma ọ bụ na-enwu oke ọkụ, anyị nwere ike weghara onyonyo nwere oke dị elu.
Ma ugbu a oge eruola ikwu maka nhọrọ kachasị adọrọ mmasị nke igwefoto dị ike nke Honor 6 Plus: Wide aperture kpọọ mode. Site na ọnọdụ a arụ ọrụ anyị nwere ike ịdị iche site na F / 0.95 ruo F / 16. Iji rụọ ọrụ a, ị ga - eweghara ihe na - erughị mita abụọ, mana nsonaazụ ya bụ ọfụma.
Su ihe oyiyi dị ike post-nhazi software na-enye anyị ohere idezi njide ahụ ozugbo emere ya iji dozie oghere ma mebie akụkụ nke masịrị anyị, na mgbakwunye na itinye usoro nke nzacha nzacha siri ike. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị agaghị erite uru na arụmọrụ a, onye ọ bụla hụrụ netwọkụ mmekọrịta n'anya ga-ahụ na nhọrọ a nnukwu akụ mmiri iji jide ihe oyiyi pụrụ iche.
N'iji ihe oyiyi weghaara na igwefoto Honor 6 Plus na ngwụcha njedebe dị ka Galaxy S6, o doro anya na oghere Honor 6 Plus dị n'azụ. Mana ọ bụrụ na anyị ahụ ha na ihuenyo kọmputa. N'iburu n'uche na n'ime ekwentị ma ọ bụ mbadamba ihe dị iche na-eleghara anya, o doro anya na nsọpụrụ emeela ezigbo ọrụ na nke a, inye Honor 6 Plus igwefoto dị iche, dị ike na karịa ihe niile nwere ọtụtụ ohere ga-atọ ndị hụrụ foto ụtọ ụtọ.
Ihe nlere nke foto ndi ewere Honor 6 Plus
Omenala foto na gburugburu ebe dị iche iche
Gbaa ya na Wide Aperture na-enweghị edezi na Wide Aperture na post-esichara
Edzie na Wide Aperture mode nhọrọ
Nkịtị foto vs HDR mode
Batrị 3.600 mAh kwere nkwa karịa nnwere onwe zuru ezu
Akụkụ ikpeazụ m chọrọ ikwu maka na nyocha a nke Honor 6 Plus bụ nnwere onwe nke ọnụ. Na Honor 6 Plus nwere batrị 3.600 mAh nke etinyere n’ime ya. Na mpempe akwụkwọ ha kwere nkwa nnwere onwe nke ụbọchị abụọ. Ndi Honor 6 Plus batrị ọ na-adịgide ogologo oge?
Mgbe m nyochachara ọdụ ndị ọzọ na Honor nso nke onye nrụpụta Asia, ana m egosipụtacha batrị batrị. Na 3.600 mAh na Honor 6 Plus na-eme nke ọma. Site n'iji ya (sọọfụ ịntanetị, iji ọrụ izi ozi ngwa ngwa, ozi na ozi ịntanetị na mgbakwunye ihe dị ka elekere 3 kwa ụbọchị na Spotify) nal Honor 6 Plus ejirila m ụbọchị 2 zuru oke. Ezie na ọ bụ eziokwu na n'abalị m rụọ ọrụ ụgbọ elu mode, M ga-ekweta na arụmọrụ bụ ihe karịrị ịrịba ama.
Ọ bụrụ na anyị tinye na nke a ka m emeela ihe karịrị awa isii na ihuenyo na-agba ọsọ egwuregwu nke oge a 6, O doro anya na batrị nke Honor 6 Plus nwere ọtụtụ ụdọ iji kwado ngwaike dị ike nke ngwaọrụ a ụbọchị abụọ zuru ezu ma ọ bụ ụbọchị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu ma ọ bụ ọdịnaya nke multimedia na-enweghị nchegbu na ị ga-akwụ ụgwọ ekwentị ahụ.
Na-eburu n'uche ngwaike ọ na-ejikọ, igwefoto ya dị ike nke na-enye ọtụtụ ohere na nnwere onwe nke Honor 6 Plus, c nyereonye mkpọrọ na maka 399 euro bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma ọ bụrụ na ị na-achọ a phablet na mma kwuchara na nwere ike idi ihe ndị gị kwa ụbọchị jog enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọ dị njọ na ọ na-arụ ọrụ na KitKat ọ bụ ezie na Honor 6 Plus a na-atụ anya imelite na ụdị kachasị nke sistemụ arụmọrụ Google n'oge na-adịghị anya. Kedu ihe ị chere gbasara nyocha anyị? You ga-azụta Honor 6 Plus?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Ukpono 6 Plus, a elu-ọgwụgwụ phablet maka ihe na-erughị 400 euro
Tinycore, ngwa nke ijikwa CPU na RAM gị smartphone